अन्नपूर्ण बिहीबार, असोज २६, २०७४ 11000 पटक पढिएको
काठमाडौं: प्रदर्शनको सँघारमा रहेको चलचित्र ‘रुद्रप्रिया' विवादमा परेको छ । निर्माण पक्ष पहिलोपटक हल र डिस होमबाट एकै दिन कात्तिक २ देखि प्रदर्शन प्रारम्भ गर्ने तयारीमा छ। डिस होम पनि नयाँ चलचित्र हलमा लागेसँगै निश्चित शुल्क लिएर रुद्रप्रियाबाटै प्रसारण प्रारम्भ गर्ने योजनामा छ। तर, चलचित्र हलको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघले हलमा लागेकै दिनदेखि टेलिभिजनमा प्रसारण गर्ने भए चलचित्र ‘रुद्रप्रिया' हलमा नलगाउने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।
नेपाल चलचित्र संघको निर्णयप्रति डिस होमले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली चलचित्र हेर्न अब हलमै जानुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको तर्क गर्दै दर्शकको चाहना र सहजताअनुसार जुनसुकै माध्यमबाट चलचित्र हेर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको बताएको छ।
‘हलमा गएर चलचित्र हेर्ने र डिस होममार्फत चलचित्र हेर्ने दर्शक फरक छन्। हाम्रा दर्शक सिनेमा हल नभएका दूरदराजका हुन्', डिस होमका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारीले भने, ‘हामीले चलचित्र क्षेत्रको हितका लागि काम गर्न खोजेका हौँ। टेलिभिजनबाटै चलचित्र निर्माताले ३०/४० लाख रुपैयाँ पाउने अवस्था छ भने किन नगर्ने?'
चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप उदयको भनाइ फरक छ। ‘यसले तत्कालका लागि निर्मातालाई फाइदा होला तर कालान्तरमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई ध्वस्त बनाउँछ', उनी भन्छन्, ‘नयाँ नेपाली चलचित्रलाई यसरी डीटीएचमार्फत देखाउने हो भने दर्शकले नेपाली चलचित्रघरमा हिन्दी, अंग्रेजी चलचित्र हेर्ने परम्परा सुरु हुन्छ। विदेशी नयाँ चलचित्र त टेलिभिजनमा आउँदैन।' अध्यक्ष उदयका अनुसार अहिले टेलिभिजनले धेरै पैसा दिए पनि पछि मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने भएकाले आफ्नो चलचित्र सस्तोमा दिन निर्माता बाध्य हुन्छन्।
चलचित्र हल नभएका देशका कुनाकन्दरामा डिस होमले नयाँ चलचित्र रिलिज भएकै दिन दर्शकमाझ पुर्‍याउन सक्नु उपलब्धि र निर्माताका लागि राहतको विषय भएको महाप्रबन्धक अधिकारीको भनाइ छ। डिस होमले संघको निर्णयलाई ‘सिन्डिकेट'को संज्ञा दिँदै यसले भर्खर जुर्मुराउन लागेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई धराशयी बनाउने दाबी गरेको छ।
चलचित्र संघको निर्णयलाई चलचित्र ‘रुद्रप्रिया'का निर्माता रमेश एमके पौडेलले समेत आपत्ति जनाएका छन्। उनले संघलाई निर्णय सच्याउन आग्रहसमेत गरेका छन्। डिजिटल युगमा दर्शकले जुनसुकै माध्यमबाट चलचित्र हेर्न पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाउन नहुने पनि उनको भनाइ छ। रेखा थापा र आर्यन सिग्देल मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र रुद्रप्रियाले प्रदर्शनअघि राम्रो हाइप पाएको छ।
आइतवार, फागुन १३, २०७४ दीपक रायमाझीको अन्तिम फिल्म चैतमा
आइतवार, फागुन १३, २०७४ ब्वाईफ्रेन्डमा महिमाको ग्ल्यामर
शनिवार, फागुन १२, २०७४ ‘झझल्को किन आउँछ’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक
शनिवार, फागुन १२, २०७४ सेलिब्रिटीको पुस्तकप्रेम
शुक्रवार, फागुन ११, २०७४ पीडितलाई ‘ए मेरोहजुर-२’ को सहयोग
शुक्रवार, फागुन ११, २०७४ आजदेखि साढे सात र पञ्चेबाजा
बिहीबार, फागुन १०, २०७४ आमिर खानको 'धुम ३' लाई 'पद्मावत' ले पछि पार्‍यो
तीन ठूला पुल निर्माण अन्तिम चरणमा 851
१७ न्यायाधीश छानबिनमा 2524
अब नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह 27257
गठबन्धनबाट डराउनु पर्दैन 460
वैश्य युगमा मिडियाका चुनौतीहरू 6851
एक्सनमा लालबाबुः तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग र अस्पतालमाथि कारवाही 3192
सुन्दरीको एउटा ट्वीटले डुबायो एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ! 7765